Cupid (2010) မှစကားပြောဖို့ကိုဘယ်လို - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
Cupid (2010) မှစကားပြောလုပ်နည်း
Cupid ရဲ့မြှားကိုနှိပ်ပါ! သင်ဟာအမြဲတမ်းနှောင်ကြိုးကိုရှာချင်လို့အရမ်းကောင်းတယ်၊ စိတ်အားထက်သန်မှုကမင်းကိုနှစ် ဦး စလုံးအတွက်တစ်သက်တာလုံးစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတုန်လှုပ်စေလိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်။ သို့သျောလညျး Cupid တစ် sneaky dude ဖြစ်တယ်, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲသူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဇီဝအစီအစဉ်, တကယ်တော့, တည်မြဲသောချစ်ခြင်းမေတ္တာမြှင့်တင်ရန်ပါဘူး။
Cupid's dart သည် limbic system ဟုလူသိများသည့်သင့် ဦး နှောက်၏မူလအစိတ်အပိုင်းတွင်အာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ limbic system သည်အလွန်စွမ်းအားပြည့်ပြီးထိရောက်စွာကြိုးသွယ်နေသောကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံသင်၏ဆင်ခြင်တုံတရားစိတ်ကိုလုံးဝလွှမ်းမိုးသွားစေသည်။ ဥပမာ၊ မိတ်လိုက်သည့်အစီအစဉ်ကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်မှာသင့်အား (၁) ဥမှသုက်ပိုးကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်မဆင်မခြင်မီးရှူးမီးပန်းများကိုချစ်မြတ်နိုးရန်၊ , နှင့် (1) အသစ်တစ်ခုကိုလှည့်ပတ်ရှာဖွေနေ။ တိုတိုပြောရရင်သင်လုပ်သည်ဖြစ်စေမမှားသည်ဖြစ်စေသင့်ကိုလှည့်စားရန်သင့်ကိုတွန်းအားပေးသည်။ ၎င်းသည်မျိုးဆက်များ၏မျိုးရိုးဗီဇမျိုးကွဲများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းနှင့်မျိုးပွားမှုကြီးလာလေလေအနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်သို့ရွက်လွှင့်ရန်မျိုးဗီဇအလားအလာပိုကောင်းလေလေဖြစ်သည်။ Callous, ဒါပေမယ့်ထိရောက်သော။
သငျသညျ Cupid outsmart ချင်လျှင်အဘယ်အရာကိုများနှင့် နေဖို့ သဟဇာတဖြစ်စေရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်? အမှန်မှာ၊ ကျေနပ်ရောင့်ရဲသော monogamy သည်မကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါ၊ နီးကပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောပေါင်းသင်းမှုသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုအကာအကွယ်ပေးသောကြောင့်စောင့်ရှောက်သူနှစ် ဦး သည်ကလေးသူငယ်များ၏သာယာဝပြောမှုအခွင့်အလမ်းများကိုတိုးတက်စေသည်။ အိမ်ထောင်စုတစ်စုသည် ၂ ခုထက် ပို၍ ထိန်းသိမ်းရန် ပို၍ စျေးနှုန်းချိုသာပြီးသွေးဆောင်မှုကိုကိုယ်တိုင်လည်းအကုန်အကျများနိုင်သည်။
သင် Cupid ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းကိုသင်လိုချင်သောရလဒ်များကိုသင်မည်သို့ ဦး တည်လိမ့်မည်နည်း။ အကြောင်းကတော့ ဦး နှောက်ရဲ့ဒီဒေသကလူ့ဆင်ခြင်တုံတရားကို ဦး နှောက် (neo-cortex) ကိုနှစ်သန်းနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ခန့်မှန်းထားလို့ပါ။ ယုတ္တိဗေဒပေါ်မှာ run မထားဘူး ထို့ကြောင့်သင်သည်မိမိကိုယ်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်ရန်သို့မဟုတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်နေရန်အတွက် willpower ကိုအသုံးမပြုနိူင်ပါ။
သင့်ရဲ့ limbic system ကိုမသိစိတ်တစ်ပိုင်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ် တွေကိုသောသင်၏အဆင်ခြင်တုံတရားဦးနှောက်ကိုရှောင်ကွင်းနဲ့ automatic တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအချက်ပြပေးပို့ကြောင်းအပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။ တွန်းဖို့ pedals ထားတဲ့နားလည်မှုဖြင့်, သင်ပိုမိုသတိရှိရှိနှင့်လျော့နည်းအတွင်းပဋိပက္ခနှင့်အတူသင့်ရဲ့အချစ်သီချင်းခုတ်မောင်းနိုင်ပါတယ်။
သင်၏ရင်းနှီးသောဆက်နွယ်မှုတွင်သတိအရှိဆုံးအချက်အလက်များပေးပို့သည့်အပြုအမူများသည်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်သည်။ သာဓကအားဖြင့်စိတ်ပြင်းပြခြင်း (လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ အော်ဂဇင်များစွာ) မိတ်လိုက်ခြင်းသည်လိင်မှုကိစ္စကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (“ ငါပြီးပြီ!” ဟူသောခံစားချက်) သည် Cupid ၏အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သည်။ (အရသာအာရုံကြောဓာတုဗေဒပေါက်ကွဲမှုအပြီးတွင်) dopamine လျှော့ချခြင်းသည်သင်၏ခြေလက်စနစ်အားဤသို့ပြောခဲ့သည် -“ မြေသြဇာလုပ်ငန်းကိုဒီမှာလုပ်တယ်၊ ဒီအိမ်ထောင်ဖက်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှုနည်းစေပြီး ၀ တ္ထုအသစ်များကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်။ ” ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသိပ္ပံပညာရှင်များသိပါတယ် Coolidge Effect။ အားလုံးနို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်ကိုးဆယ်ခုနစ်ရာခိုင်နှုန်းကဒီ signal ကိုအပေါ်လုံးဝ၎င်းတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝတွေကို operate ။
ရှားရှားပါးပါးတွဲစပ်သောနို့တိုက်သတ္တဝါအနေနှင့်ဤမိတ်လိုက်သည့်“ ခြေနင်း” သည်ချစ်သူများကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေကြောင်းသင်အသိအမှတ်ပြုရန်နှေးနေပေမည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ limbic system မှာအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အခြား program နှစ်ခုရှိတယ်။ ဒီပရိုဂရမ်တွေကဒီဂရီအမျိုးမျိုးအထိနို့တိုက်သတ္တဝါတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့“ ရ၊ ဆင်း၊ အိမ်ပြန်ပါ” ဆိုတဲ့ဟာကိုဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။
ပထမတစ်ခုမှာပျားရည်ဆမ်းခရီးကော့တေးဖြစ်သည်။ ချစ်သူများအသစ်သည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအာရုံကြောဓာတုဗေဒယာယီအားဖြည့်ရိုက်ချက်ကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဒီခေါင်းကိုက်နေတဲ့ကော့တေး (အာရုံကြောကြီးထွားမှုတိုးလာမှု၊ dopamine၊ norepinephrine၊ အောက်ပိုင်း serotonin နှင့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ) ကအရူးအမူးစွဲလမ်းစေပြီးစွဲလမ်းမှုကိုပင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အချိန်ကာလတစ်ခုသည်လိင်မှုကိစ္စနှင့်ချစ်သူများအသစ်များမကြာခဏကြုံတွေ့ရသည့်ရိုင်းစိုင်းသောစိတ်အပြောင်းအလဲများနှင့်ကြုံရလျှင်ပင်“ ရွေ့လျားခြင်း” သတင်းစကားကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေသည်။ (အနာဂတ်ပို့စ်တွင်ဤအမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်များအကြောင်းပိုမို။ )
အိုမှာအားလုံး၌သင်တို့၏ပျားရည်ဆမ်းခရီး neurochemistry ကန်ဘောယူဆ, သုတေသနပြုလုပ်ဖွယ်ရှိနှစ်နှစ်အတွင်းကိုချွတ်ဝတ်ဆင်လိမ့်မည်ပြသထားတယ်။ ကပယ်ကျီနှင့်အမျှတစ်ဦးချင်းစီကတခြားသင့်ရဲ့သဘောထားအမြင်အော်ဂဇင်ပြီးနောက်ခဏသာအတက်အကျလိမ့်မည်။ တစ်ခုမှာခင်ပွန်းကဖြစ်ရပ်ဆန်းဤနည်းကြုံတွေ့:
၁၅ မိနစ်လောက်လိင်ဆက်ဆံချင်တယ်။ ထိုအခါငါတစ်ပါတ် grouchy ဖြစ်လိမ့်မယ်။ တဖန်ငါချိုသောချိုကဲ့သို့ပွားများလိမ့်မည်။
ယောကျာ်းလေး - ကျွန်တော့်ဇနီးကတကယ်တော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုညဥ့်နက်ပြီးတဲ့နောက်နံနက်ခင်းမှာခွေးကြီးဖြစ်သွားတယ်။ ငါအော်ဂဇင်မျိုးစုံနဲ့ ၂-၃ နာရီကြာဆွေးနွေးမှုတစ်ခုပြောနေတယ်။ နောက်နေ့မနက်ကျွန်ုပ်သည်ခရစ်တော်ဆန့်ကျင်သူဖြစ်သည်။
မိန်းမ - ဒီအတိုင်းငါပဲဖြစ်မယ်။ ငါချစ်ရတဲ့ခင်ပွန်းနဲ့ညနက်ပြီးတဲ့နောက်မနက်ခင်းမှာထပြီးတစ်ခါတလေငရဲကခုန်သလိုခံစားရတယ်။ ။ ။ တကယ်စိတ်တိုခြင်းနှင့် Moody ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ငါဟာတကယ့်ကိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးပါ။ အော်ဂဇင်များဖြန့်ကျက်လာသောအခါအခြေအနေများပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ O သည်အမြဲတမ်းပုံမှန်ဖြစ်နေစဉ်ကျွန်ုပ်၏ဆွဲဆောင်မှုမှာသိသိသာသာကျဆင်းခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ကြင်ဖော်အပေါ်ပူနွေးသော fuzzy ခံစားချက်များကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသတိပြုမိသည်။
ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေများသည်ပိုမိုနူးညံ့သည့်ပုံစံများဖြင့် (သူတို့အားပေးသည့်စီမံကိန်းများနှင့်မကိုက်ညီသော်လည်း) ဆက်ဆံရေးတွင်အရောင်တောက်ပမှုကိုပျောက်ကွယ်သွားစေနိုင်ပြီးမိတ်ဖက်နှစ် ဦး စလုံးသည်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်လူသစ်နှင့်ပိုအဆင်ပြေမည်လားဟုတွေးမိစေသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကြောဓာတုဗေဒတွင်သိမ်မွေ့သောပြောင်းလဲမှုများကကျွန်ုပ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်ကိုမမှတ်မိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အရိပ်မိနေသည့်အားနည်းချက်များကိုညွှန်ပြခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်များကိုဆင်ခြင်တုံတရားရှိကြသည်။
သတင်းကောင်းမှာလူသားတို့၏“ ရွေ့လျားသွားသော” အစီအစဉ်၏အသံကိုလျှော့ချနိုင်သောအခြားအစီအစဉ်တစ်ခုရှိသည်။ သို့သော်ငါတို့ Bond “ ခြေနင်း” သည်ကျွန်ုပ်တို့မှန်ကန်သောကြိမ်နှုန်းနှင့်မှန်ကန်သောမသိစိတ်များကိုသာပေးသောအခါမှသာအလုပ်လုပ်သည်။
အဆိုပါ ကပ်လျက်တည်ရှိကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန် Cupid အချက်ပြကြောင်းအပြုအမူတွေ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အမြင်ချင်းကြည့်ခြင်း၊ နှုတ်နှင့်လျှာဖြင့်နမ်းခြင်း၊ ကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းမရှိသောစကားလုံးများ၊ နှစ်သိမ့်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်း၊ နို့သီးခေါင် / ရင်သားများကိုထိခြင်းနှင့်နို့စို့ခြင်း၊ ချစ်သူ၏လိင်အင်္ဂါများ၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်စသည်တို့ကိုအေးဆေးငြိမ်သက်စွာထားပါ။
ဤအပြုအမူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏တစ်ခုတည်းသောအစိတ်အပိုင်းကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောနိုင်ပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ သူတို့က“ ဒီစိတ်ခံစားမှုကိုခိုင်မာစေပါ” ဟုသတိလစ်သောသတင်းစကားကိုပို့သည်။ သူတို့နို့တိုက်သတ္တဝါများမှဆင်းသက်လာသောကြောင့်ဤစကားများသည်အလုပ်လုပ်သည် မွေးကင်းစကလေး-စောင့်ရှောက်သူများပူးတွဲဖိုင်ကိုအပြုအမူတွေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေနဲ့အတူမေတ္တာ၌ကရြောကျဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enabled နှင့်အရာငါတို့ကလေးတွေနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကရြောကျခွင့်ပြုပါ။ ၏သင်တန်း, တွေကိုသူတို့မွေးကင်းစနှင့်စောင့်ရှောက်သူများအကြားပြုပါထက်ချစ်သူများအကြားနည်းနည်းကွဲပြားခြားနားသောကိုကြည့်ပေမယ့်ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ရက်ရက်ရောရော touch နှင့်ဆက်သွယ်မှုန်းကျင် revolve ။
မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းတို့သည်နီးပါးပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းများသည် limbic system ကိုထိရောက်စွာအချက်ပြသည် နေ့စဉ်။ တောင်မှခဏသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုအလုပ်လုပျနိုငျ, ဒါပေမယ့်စုံတွဲများသာခဲ, ဒါမှမဟုတ်သာအထွတ်အထိပ်မှရတဲ့နှင့် ဆက်စပ်. သူတို့ကိုအသုံးချမယ်ဆိုရင် Bond အပြုအမူတွေဝေးလျော့နည်းထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။
Bond အပြုအမူတွေ foreplay ကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ ဝေဒနာတွေ ချစ်သူများ '' အာရုံကြောစနစ်များ (အထူးသ, amygdala) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, foreplay လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Foreplay ရည်မှန်းချက် -oriented ဖြစ်၏ bond အပြုအမူတွေမရှိကြပေ။ (သိသာထင်ရှားသည့်အချက်မှာ၊ အော်ဂဇင်မပါဘဲနူးညံ့သိမ်မွေ့သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အားကောင်းသည့်နှောင်ကြိုးပြုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သမိုင်းတစ်လျှောက်ရှိယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးသည်ဤနည်းစနစ်ကိုထိ မိ၍ ၎င်းကိုမတူညီသောအမည်များပေးခဲ့သည်။ အနာဂတ်ရေးသားချက်များတွင် ပို၍ ဖြစ်သည်။ )
ဒါကြောင့်သင်မည်သို့ Cupid စကားပြောသလဲ? ၏ခြေနင်းနှိပ်ဖို့သင့်ဆင်ခြင်တုံတရားဦးနှောက်ကိုသုံးပါ သင့်ရဲ့ သင့်ဦးနှောက်၏စရိုက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုတိုက်ရိုက်တိကျတဲ့အချက်ပြကယ်လွှတ်ခြင်းငှါရှေးခယျြမှု။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်အချစ်ဇာတ်လမ်းအတွက်ရှာအံ့သောငှါသမျှရလဒ်များအတွက်ခုတ်မောင်းနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးချင်တယ်ဆိုရင်, (စိတ်အေးလက်အေးလိင်ဆက်ဆံမှုအပါအဝင်) ဘွန်းအပြုအမူတွေ soothing နေ့စဉ်အပေါ်အလေးပေးနေရာနှင့်ဝေးသင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကုန်ခမ်းတော့မှာထံမှခုတ်မောင်း။ သင်သည်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအသက်တာ၌လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်ပိုမိုပြင်းထန်သော ပို. မကြာခဏ orgasm ကနေတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာ satiation မှီအောင်လိုက်လော့။
[ဤဆောင်းပါးပါရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍: ဂန္ထဝင်ပန်းချီဆရာများ၏အကြိုက်ဆုံးဆောင်ပုဒ်မှာ os ရော့စ်၏လှုံ့ဆော်မှုများကိုဖြိုခွဲခဲ့သော Aphrodite (Love) ဖြစ်သည်။ ]